Home Somali News Egypt:Jaamacadda Carabta oo isku raacey dhismaha ciidan gurmad ah
Shirkii 26aad ee Jaamacadda Carabtu yeeshaan oo ka furmey dalka Masar maalintii shalay (Sabti) ayey isku raaceen dhismaha ciidamo gurmad ah oo carabtu wada leedahay, kuwaas oo wajaha markii dal kamid ah xaalad khatar ah soo wajahdo. Dhismaha ciidan Carabtu wada yeelato ayaa la aaminsan yahay in ay tahay mid qaadanaysa waqti aad u dheer, marka la eego khilaafaadka Carabta dhex-yaala.
War-murtiyeed shirka ka soo baxay ayaa loogu baaqey Malayshiyaadka Xuuthiyiinta Yemen in ay isaga baxaan caasimadda Yemen ee Sanca iyo dhimsayaasha hay’adaha Dawladda, isla markaana ay hubka dhigaan oo ku wareejiyaan laamaha sharciga.
Warka ka soo baxay shirka Carabta ayaa lagu taageeray hawlgalka loogu magacdarey “Operation Decisive Storm” kaas oo ay hoggaamineyso Boqortooyada Sucuudiga ayna ku mideysan yihiin 10 dal.
War-murtiyeedka ayaa sidoo kale lagu caddeeyey in Jaamacadda Carabtu ay taageersan codsiga Madaxweynaha dibad jooga ah ee Yemen Cabdirabbu Mansuur Hadi ee ahaa in dalalka Khaliijku ay soo faro geliyaan xaaladda Yemen.
Dalka Ciraaq ayaa diidan hawlgalka Sucuudigu hoggaaminaayo, waxaana ay sheegeen in ay ka soo horjeedaan hawlgal kasta oo Mileteri isla markaana ay taageersan yihiin wada-hadal in lagu dhameeyo muranka Yemen, Ciraaq oo shiicadu u badan tahayw axay dagaal kula jiraan Kooxaha Suniyiinta ay ISIS ugu weyn tahay, sidoo kale dalka Lubnaan ayaa wel-wel ka muujiyey faro gelinta Yemen lagu hayo, labadan dal waxaa saameyn weyn ku leh dalka IRAN oo taageero siiya Xuuthiyiinta shiicada ah ee dalka Yemen.
Jaamacadda Carabta ayaa sidoo kale ka hadashey xaladda dalka Liibiya, waxaana ay ku baaqeen in la qaado cuno qabateynta saaran Libya ee dhanka hubka isla amrkaana la hubeeyo Dowladda Qaramada Midoobey aqoon-san tahay.